အပ်ချုပ်ပညာ ကြယ်သီး လေး
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်ပညာ ခလုတ်များ လေး -> အပ်ချုပ်ပညာ ကြယ်သီး လေး
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan အပ်ချုပ်ပညာ ကြယ်သီး လေး ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Equivalent Systems: 3201; 68X5, SY1628
machine: Button ကိုစက်
အပ်နဖားကိုတွဲ: အပ်ချုပ် Buttons လေး
ဒါဟာ (ခလုတ်ကို attachment အတွက်) အပ်ချည်တစ်မျှင်၏ကြီးမားသောအဆုံးအောင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ Cone-shaped အချက်များနှင့်ချုပ်များ၏အရည်အသွေးအဘို့အကို double ပဝါဝိသေသရှိသည်။ ထိုသို့သောညီအစ်ကိုက, အဆိုတော်အဖြစ်စက်, တချို့အမှတ်တံဆိပ်အောက်ပါအားလုံးကိုက်ညီ။ Equivalent စနစ်များ: 3201; 68X5, SY1628 ။
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ခလုတ်များချုပ် : BQX1
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> တိုက်တေနီယမ်အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို : DOX5，DOX558
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ခလုတ်များချုပ် : DPX1
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> တိုက်တေနီယမ်အပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို : EBX750，EBX755
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်ပညာ ကြယ်သီး လေး : LQX5
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ချုပ်အပ်နဖားကို : SMX332LG，SMX332EXTLG
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ကူးသန်းရောင်းအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို : TQX1，TQX7，TQX9